Madepositi ekudyara mumusika wemasheya | Ehupfumi Zvemari
Madepositi ekudyara mumusika wemasheya
Imwe yemaitiro ekudyara mumusika wemasheya pasina kuzviburitsa pachena inogadzirwa kuburikidza neyakagadziriswa-nguva bhangi dhipoziti yakabatana misika yemari. Mushure mezvose, vanovimbisa kudzoka kwakatemwa gore rega rega, zvisinei nezvinoitika mumisika yemari. Zvisinei nezvose, ichiri chigadzirwa chisinganyanyo kuzivikanwa nevaponesi vadiki. Nekudaro, kuhaya kwako hazvireve kuti iwo ese mabhenefiti ako. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinosanganisira akateedzana ekukuvadza iwe aunofanira kufunga nezvazvo kubva zvino zvichienda mberi.
Fixed-term deposits yakabatana nemusika wemusika ine nguva yakakwira yekuchengetedza kupfuura mune mamwe mamodheru ekuchengetedza. Nenguva dze pakati pemwedzi gumi nembiri nemakumi matatu nematanhatu anenge uye kuti mune zvese zviitiko hapana zvirango zvekukanzura. Kwete pasina, zvichave zvakafanira kumirira kupera kwayo kuti itorezve zvipo zvehupfumi. Semhedzisiro yemaitiro aya, hakuzove nesarudzo kunze kwekuve nekuoma mitezo kwenguva yakareba.
Iyi kirasi yezvigadzirwa inozivikanwa nekugona kupa yakakura kufarira kana mamwe mamiriro akasangana mukuyera kwemitengo yemusika wemasheya. Asi chero zvakadaro, iko kufarira kuchave kwakashata sezvo izvi zvigadzikiso vimbisa hushoma purofiti ye0,3%. Neyezve mukana wekuti kubatirwa kwayo hakuneyi chero mhando yemakomisheni kana zvimwe zvinoshandiswa mukutungamira kana kugadzirisa. Nemipiro inodhura kwazvo kune vese vashandisi iyo inogona kuverengerwa kubva kungori ma1.000 euros parimwe dhipoziti.
1 Njodzi shoma mukufumurwa
2 Hunhu hweaya madhiri
3 Yakavimbiswa mashandiro nguva dzese
4 Zvinangwa zvakaoma kwazvo kusangana
5 Zvimiro zveichi chigadzirwa
6 Kutya kuderera kwenyika
Njodzi shoma mukufumurwa
Izvi zvinokutendera kuti uzarure zvinzvimbo mumusika wemasheya, asi uchibvisa njodzi dzayo kubva pakutanga. Uyu ndiwo mupiro mukuru wechigadzirwa ichi yakagadzirirwa kuchengetedza uye kuti yakakosha kwazvo kune chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Nekuti kudzoka kunogara kuchigadzirwa, kunyangwe akasarudzwa masheya kana indices zvinowira mumisika yemari. Izvi mune chero zvazvingava chimwe chezvakanaka zvinhu mukuhaya kwavo uye izvo zvinokurudzira chikamu chakanaka chevashoma nevapakati varimari kuvanyorera kuti vadzivirire capital yavo pamusoro pezvimwe kufunga.
Kunyangwe pane izvo zvinopesana, padivi rakashata inyaya yekuti zvigadzirwa izvi hazvitore kuongororwa kunogona kuitika kwavanogona kuwana mumisika yemari. Ndizvozvo uchave wakaganhurirwa kana iri yekufarira iwe yaunogona kugamuchira muzviitiko zvakanaka kwazvo kumisika yemasheya. Nekuti mukuita, ivo havangambokwanise kuzadzikisa kuongororwa kwehunhu hwakabatana nemadhipatimendi eaya hunhu. Ichi ndicho chiratidzo chikuru cheiyi kirasi yeakagadzika-term dhipoziti.
Hunhu hweaya madhiri
Iyi kirasi yezvakadai zvisingaite zvinogona kubvumidzwa kubva ku1.000 euros ine maturity mazwi ayo anovhara kubva pamakore maviri kusvika mana uye ine nguva imwechete yekunyorera iyo inopera pazuva rakatarwa kana kana huwandu hwese hwakatemerwa hwakanyoreswa, hunotaridzwa kana kuvimbiswa dhipoziti iyo inosanganisira "bhasiketi" yemasecurity akanyorwa mumakambani makuru emasheya epasirose wedzera purofiti inopihwa nezvigadzirwa izvi, kunyangwe pamutengo wekutevedzera nhevedzano yezvinodiwa.
Dzinoumba imwe nzira yakachengeteka pane kudyarwa zvakanangana mumusika wemasheya sezvo hafu yemari ichienderana nemari yakamisikidzwa uye chimwe chikamu chakabatanidzwa, zvakazara kana zvishoma, kushanduka kwema indices, masheya, mari kana chero imwe nongedzo yezvinhu zvese. musika wepasi rose uye wepasi rose. Nezvinodiwa izvo zvataurwa pamusoro uye izvo zvinogona kudzikisira zviwanikwa zvinogona kugadzirwa nenzvimbo dzakatemerwa mumisika yekutengesa.
Yakavimbiswa mashandiro nguva dzese
Kune rimwe divi, kutarisirwa kwakakosha kunofanirwa kutorwa nemhando idzi dzezvigadzirwa sezvo zvichisiyaniswa nenyaya yekuti guta guru rinogona kuvimbiswa kana kusazovimbiswa, asi kana zvisiri izvo, mutengi anogona kurasikirwa neese mari yake, zvinoenderana nehunhu hwesipo imwe neimwe Mazhinji emabhangi muSpain parizvino ane chigadzirwa chine hunhu, imwe neimwe ichitsvaga muchigadzirwa chakavakirwa kuchengetedzeka, indices kana mabhasiketi yehumwe hunhu zvichienderana nekubheja kwakaitwa. Izvo zvakajairika ndeavo akavakirwa pamusika weSpanish wemusika, asi iyo yekudyidzana kwepasi rose hairegeredzwe nekuda kwavo, iyo inotosvika pamari. Iko kupihwa, nekudaro, kwakanyatso kusiyaniswa mune zvese zviitiko.
Imwe yemipiro yayo mikuru ndeyekuti inochengetedza bhegi rekuchengetedza rakatsiga, kunyangwe tswanda yemasheya isingazvibate sevashambadzi vadiki nepakati vanodiwa. Kunyangwe chiri chokwadi kuti kufarira kwavanoona kuri kushoma, izvo zvinoita kuti zvisave nechokwadi kana zvakakodzera kuzviita zvepamutemo. Chinhu chinopesana ne komisheni kusunungurwa uye zvimwe zvinoshandiswa mukutarisira kana kugadzirisa. Chero zvazvingaitika, icho chigadzirwa chinosimudzirwa nemabhangi kukurudzira vatengi vavo kuti vasarudze nezve zvigadzirwa zvekuchengetedza.
Zvinangwa zvakaoma kwazvo kusangana
Chero zvazviri, chimwe chezvipingamupinyi zvakakura zveichi chigadzirwa chekuchengetedza ndechekuti zvakaoma kutevedzera. Hazvishamisi kuti vanomisikidza zvinangwa zvakakwirira zvisingawanzo kuzadzikiswa. Dai izvi zvaive zvakadaro, iyo purofiti inopihwa nekirasi ino yeyakagadziriswa-nguva dhipoziti yaigona kusvika 5% mune yakanakisa kesi, nepo zvichipesana, dai yakanga yasarudza kutenga nekutengesa masheya, kudzoka pane kuchengetedza kwaizoitwa . pamusoro pe10%. Kubva pane ino maonero, aya mabhengi madhipatimendi anogona kunzi haana pundutso.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti icho chigadzirwa chakagadzirirwa kuchengetedza izvo zvisingawanzo zviripo mu kupihwa kubva kumabhangi ese. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinobuda munguva uye kwete nguva dzose nenzira yakajairika. Kusvika padanho rekuti vashandisi pachavo vangave vaine mamwe matambudziko ekunyorera kwairi pavanenge vachida kupa kwavo kwemari mipiro. Nedzakateedzana mamiriro ezvinhu anochinja zvakanyanya kubva pamwedzi kusvika pamwedzi. Seimwe yemhedzisiro yakaipa pakubata kwako kubva zvino zvichienda mberi.
Zvimiro zveichi chigadzirwa
Madepositi akabatanidzwa nemari yemari kubva kuemaquit ndiyo yemhando yekudyara iyo yakanyatso fanika nemafomu echinyakare. Musiyano chete ndewekuti kubatana kune kuchengetedzeka kana misika yemasheya. Asi kuchengetedza chimiro chakafanana nguva dzese uye pamusoro pese kugadzirisa iwo iwo marongero epakati. Pasina kana mutsauko wakakosha, icho chigadzirwa chebhangi icho chinoitirwa chimiro chakanyatso tsanangurwa chevashambadzi vadiki nepakati nepakati. Zviri mushandisi anochengetedza kana kuzvidzivirira uye iwe unoda kuchengetedza yako mari yemari pane zvimwe zvekufunga.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti kwakadaro kufanana kwaro kwakatemwa-kwenguva bhangi dhipoziti, kuti haina kutariswa seyechigadzirwa chemari sekudaro. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinonyanya kuitirwa kuchengetedza, kubvira kuchengeteka kunokurira pamusoro pechinogona kuitika kufarira kungaunzwa nekuhaya kwako. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Ichi chinhu chausingakwanise kukanganwa kubva zvino zvichienda mberi kana iwe usiri kuda kuve nezvimwe zvinoshamisa kubva panguva ino chaiyo.
Ikozvino zvinongoenderana nesarudzo yako wega, kuongorora kana zviri nyore kuhaya chimwe chezvinhu izvi zvekuchengetedza. Takatarisana nekusagadzikana kwemari yemari yemari. Iko kusagadzikana kuchave imwe yemasangano ayo akajairika, zvirinani mugore rino razvino. Hazvishamise kuti matumba anotsvagirwa kuchengetedza mari panguva ino.
Kutya kuderera kwenyika
Chero zvazvingaitika, mumisika yemari kune mikana yekunyanya kuderera kwehupfumi. Kunyangwe kubvira FED Zvinosimbiswa kuti aya mafungire asina kunaka ari pamberi peiyo macroeconomic dhata yanga ichiitika mumwedzi yapfuura. Chero zvazvingaitika, ndiwo mamiriro ezvinhu ayo vashoma nevapakati varimimari vanofanirwa kurarama kubva panguva dzino chaidzo. Nekuti vanogona kurasikirwa nemari yakawanda mukushanda kwavo mumisika yemari uye paisazove nesarudzo kunze kwekuchengetedza capital inowanika yekudyara.
Kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti dhata dzazvino nezviratidzo zvehupfumi hweChinese hazvina kunaka. Kusvika padanho rekuti vanga vachizivisa chibvumirano mudanho rekukura mumatunhu avo anobereka. Mupfungwa iyi, hapana imwe sarudzo asi kunyatsoteerera kushanduka kweaya mamiriro ezvehupfumi kuti uone kana iri nguva yakanaka yekutenga masheya kana kana, nekusiyana, zviri nani kuve mune mvura mamiriro kuti uzvidzivirire kubva pazviitiko zvakashata kwazvo mumisika. mari inoshanduka. Kunyanya, nekuda kwekusagadzikana kukuru kunogona kuiswa mumutengo wekuchengetedzeka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Madepositi ekudyara mumusika wemasheya
Ndeipi njodzi dzekutengesa mapuratifomu?
Magetsi makambani vs emabhangi chikamu chengetedzo